गुणस्तर भूमिका-निभाउने खेलहरू - यो सधैं कुनै पनि खेल चरणको लागि आनन्द हो। लडाई प्रणाली, र वर्ण विकास रूख, र वर्ण, र धेरै ठूलो खुशी पारित प्रक्रिया - जब सबै आरपीजी तत्व काम गरे। यसबाहेक, यो अब विकासकर्ताहरूले आकस्मिक परियोजनाहरू जनसंचार बजार लागि डिजाइन गर्न गर्छन कि टिप्पण लायक छ। त्यसैले तपाईं निराश हुन पूर्वानुमानित खेल पनि सजिलो हुनेछ जब छैन। सरल र "Skyrim", प्रसिद्ध श्रृंखला एल्डरले पाण्डुलिपिहरू को पाँचौ भाग भनिन्छ गर्न सकिन्छ। यो विकासकर्ताले एक विशेष क्षणमा फँस छन् जो ती हेरविचार लिएका छन् भन्ने हो। तिनीहरूले, विशेष धोखा कोड केही वस्तुहरु, सुविधाहरू, सामान्य मा दिन सक्छ कि शुरू गरेको गेमप्लेको परिवर्तन गर्न असीमित क्षमता छ। तपाईं आफ्नो क्षमता मा विश्वास छैन भने त, तपाईं निश्चित "Skyrim" कोड प्रविष्ट गर्न कसरी सिक्नुपर्छ। तपाईं एक मृत अन्त जाने भने यो ज्ञान तपाईं धेरै उपयोगी हुनेछ।
Skyrim - यो खेल के हो?
स्वाभाविक, तपाईं तुरुन्त कोड प्रविष्ट गर्न "Skyrim" मा बाटो सामना गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो खेल मा तपाईं को के आवश्यक छ पहिलो बुझ्न धेरै समझदार छ, सबै कुरा यहाँ हुन्छ, र जहाँ अफ्ठ्यारो उत्पन्न गर्न सक्छ यो आधारमा। त्यसैले, "Skyrim" - भूमिका-खेल खेल जसमा तपाईं कारण मौका भाग्नु व्यवस्थित गर्ने मृत्यु, सुनाइसकेको थियो भगुवा को भूमिका निर्वाह - तपाईं जीवन लिन थियो जहाँ महल, मा, ड्रागन आक्रमण। तपाईं भाग्नु, र त्यसपछि एक परिणाम जो तपाईं Dragonborn भनिन्छ गरिनेछ, तपाईंको साहसिक, तपाईंको आरोहण अप सामाजिक सीढी सुरु व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
खेलको अघिल्लो भागमा रूपमा, "Skyrim" खुला विश्व, कि छ, तपाईं कहानी लीन छैन, तपाईं विश्व यात्रा गर्न सक्छन्, विभिन्न कार्यहरू प्रदर्शन र प्रकृति को सुन्दरता रमाइलो गर्न, राक्षस र डाकुओं लड्न। कथा खोजहरू तपाईं टिप्न र तपाईं गर्न चाहनुहुन्छ जब बोक्न सक्छ। यो लामो र कठिन यात्रा हो भनेर याद, त्यसैले "Skyrim" यो कौशल तपाईं उपयोगी छ रूपमा, कोड प्रविष्ट गर्न कसरी सिक्न गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईं समस्या सुख, तर सम्झना सक्षम हुनेछ: कोड को नियम उल्लङ्घनको छन्। खेल एकल भएकोले, तपाईं कुनै एक यस को लागि के हुनेछ, तर तपाईं प्राप्त हुनेछ उपलब्धिहरू, र तपाईं आफ्नो र अरूको सहयोग, सानो बिगार्छ छाप संग छैन खेल समाप्त गरेको बोध। तर तपाईं तयार हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि गरेको ठ्याक्कै प्रक्रिया के सामना गरौं।
के तपाईं "Skyrim" कोड प्रविष्ट गर्न कसरी सिक्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यो खेल यस सन्दर्भमा अरूलाई धेरै कुरा फरक छैन भनेर थाहा हुँदैन। Cheats शब्दहरू, प्रतीक, वा तपाईं यो वा त्यो परिणाम दिनको सेट केही संयोजन हो। वर्णहरू प्रविष्ट आदेश लाइन, को टिल्डे (~) थिचेर - सबैतिर लगभग एउटै कारण जो छ। लाइन देखिन्छ तपाईंले चाहेको धोखा कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि "प्रविष्ट गर्नुहोस्" बटन थिच्नुहोस्। तुरुन्त कि पछि कन्सोल बंद, र धोखा सक्रिय - सबै यहाँ कुनै रहस्य छ कि गर्नुपर्छ। त्यहाँ पैसा, हतियार, हतियार मा "Skyrim" मा कोड र अधिक हो, तर पहिले तपाईं अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सिक्न आवश्यक छ।
को Cheats को परिचय पहिले बचत
गैर-खेलाडी खेल विधि प्रक्रिया प्रत्यक्ष हस्तक्षेप - तपाईं बित्दै जाँदा खेल मा कोड प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, सधैं यो छ कि सम्झना। यो छ कि यो तपाईं पैसा, वा अरू के तपाईं आफ्नो जोखिम मा यो सबै गरिरहनुभएको मा "Skyrim" मा कोड प्रयोग कि कुरा छैन हो। र पढ्ने कुरा सक्रिय पछि गलत जान्छ, र आफ्नो मात्र बचत SPOILED गरिनेछ भने, तपाईं दोष राख्न कुनै एक हुनेछ। त्यसैले, सधैं तपाईं कोड प्रयोग विशेष गरी भने, cyclical बचत बनाउन। यो फाइल बचत र आफ्नो पालो आफ्नो प्रगति रेकर्ड गर्न कम्तिमा तीन गर्न आवश्यक भन्ने हो। यसरी तपाईंले रहने, सबै आफ्नो खेल प्रगति बिगार्छ कि अन्य फाइलहरू मध्ये एक को हानि को मामला मा likelihood कम। र तपाईं हतियार वा अन्य वस्तुहरू मा "Skyrim" मा कोड प्रविष्ट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले पहिले राम्रो संरक्षण बनाउन, त्यसैले तपाईं नतिजा पछुताउनु छैन।
सबै भन्दा लोकप्रिय Cheats "Skyrim"
त्यहाँ विकल्पहरू ठगी विभिन्न समावेश जो खेल, को लागि कोड को एकदम एक व्यापक सूची छ। तर, पाठ्यक्रम, त्यहाँ अरूले भन्दा लोकप्रिय छन् कि "Skyrim" मा धोखा कोड छन्। पहिलो स्थानमा, को पाठ्यक्रम, परमेश्वरले मोड, जो कोड TSG द्वारा सक्रिय छ। जब तपाईं भगवान मोड मा हिंड्न, तपाईं कुनै पनि क्षति प्राप्त छैन र मर्न सक्दैन - धेरै उपयोगी सुविधा तपाईं खेल मा एक निश्चित स्थानमा पारित गर्न सक्छ भने छैन।
अक्सर यो tcl कोड प्रयोग - यो खेलाडी उड र पर्खाल हिंड्न क्षमता दिन्छ। psb बारे मा भूल छैन - जादू एक कोड प्रयोग गरेर आफ्नो चरित्र, सबै spells प्राप्त गर्ने क्षमता को कक्षा बिना प्रमुख भूमिकाको एक खेल्छ जहाँ, खेल एक शक्तिशाली हतियार हो। तर हुन होसियार - अघिल्लो Cheats समावेश पहिले मोड असक्षम र्याप गर्न सक्नुहुन्छ भने, हिज्जे सधैंभरि तपाईंसँग रहन हुनेछ, त्यसैले तपाईं एक धोखा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा मात्र गाह्रो ठाउँ पारित गर्न - अन्य भन्दा राम्रो चयन गर्नुहोस्। त्यहाँ स्तर, वर्ण गरेको उपस्थिति परिवर्तन गर्न यति मा वृद्धि गर्न, र, कोड को रूपान्तरण मा एक "Skyrim" छ। ती सबै तपाईंले आफैलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
"Skyrim" को लागि Cheats एक किसिम
मा कोड "Skyrim" धेरै विविध र खेल धेरै पक्षहरू कवर। केही सीधा वर्ण असर, कि छ, यो त मा स्वास्थ्य, मानयो, कौशल वृद्धि गर्न सक्छन् र। तर कोड पनि परिवर्तन र खेल को उपस्थिति सक्नुहुन्छ -, नक्सामा प्रतिमा प्रदर्शन अलग क्यामेरा मोड समावेश गर्न एक इन्टरफेस हटाउन। सबै को सबै भन्दा राम्रो तपाईं त तपाईं पूर्णतया आफ्नो क्षमताहरु अनुभव गर्न साथै तपाईँको लिङ्कमा एक खेल सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछ किनभने, आफूलाई धोखा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
वस्तुहरु गर्न कोड
हामी पनि धोखा कोड भनेर खेल मा बिल्कुल कुनै पनि वस्तु प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ कुरा गर्नुपर्छ। निम्नानुसार उहाँले शुरू छ: कन्सोलमा मा, player.additem, लेख्न त तपाईं विषय को पहिचान निर्दिष्ट, र त्यसपछि - राशि तत्संबंधी - अंतर मार्फत। सायद, तपाईं, को परिचायक संग क्षण बाहेक बुझ्छु। , खेल वस्तुहरु को नाम पहिचान गर्दैन त्यो आफ्नो संख्यात्मक मान, ie, आईडी तिनीहरूलाई नियुक्त सिक्छन् ... - वास्तवमा, सबै धेरै सरल छ तसर्थ, ब्लेड हत्यारा 00058211 नामित र इस्पात टोप ENCHANTED - 0O0B50E7। "Skyrim" हतियार कोड र अन्य वस्तुहरू कहीं सूचीबद्ध छैन, त्यसैले तपाईँले यसलाई हुनु आवश्यक छ त प्रयोग गर्न, तिनीहरूलाई आफैलाई खोज्न छ।
Cheats प्रयोग गरेर कठिनाइ
निस्सन्देह, समस्या बिना छैन। कोड प्रविष्ट गर्दा त्यहाँ तपाईं चाहनुहुन्छ कि Cheats फाइदा लिन रोक्न केही कठिनाइ हुन सक्छ। पहिलो कठिनाई तपाईं भेट हुन सक्छ जो संग - तपाईं कोड प्रतिनिधित्व प्रविष्ट गर्दा, यो कन्सोल बाट वर्ण सट्टा वर्गहरूको उपस्थिति छ।
निस्सन्देह, केही फन्ट अमिल्दो छ, तर कसरी यसलाई समाधान गर्न? खेल संग फोल्डर मा तपाईं fontconfig.txt फाइल फेला पार्न छ। यसको विस्तार अनुसार पहिले नै यो एक सरल नोटप्याड द्वारा सही गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट छ। तपाईं फन्टहरू लागि जिम्मेवार छ जो लाइन, पत्ता लगाउन आवश्यक छ। तपाईं एक समस्या छ भने, आवश्यक लाइन फन्ट एरियल दर्ता गरिनेछ। FuturaTCYLigCon - तपाईं एक बरु असामान्य संस्करणमा यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। तुरुन्त कि पछि, फाइल बचत र फेरि खेल सुरु - अब कन्सोल तपाईं त्यहाँ प्रवेश कि सबै वर्ण प्रदर्शन गर्नेछ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, सबै कोड अंग्रेजी मा "Skyrim" मा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ एक रूसी किबोर्ड लेआउट छ यदि, र तपाईँले एक मानक तरिका मा भाषा परिवर्तन गर्न प्रयास गर्नुहोस्, तपाईं काम गर्ने छैन। खेल सुरु हुँदा एक भाषा परिवर्तन गर्न, र तपाईं सक्दैन प्रयोग कोड धोखा गर्छन्। हामी यो प्रश्न एकदम सरल छ समाधान - तपाईं बस पूर्वनिर्धारित भाषा रूपमा अंग्रेजी सेट गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि यो खेल संग लोड गरिनेछ, र तपाईंले गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ, को पाठ्यक्रम, आफ्नै चाल, को रूपमा छ भाषा पट्टी यसको अपरेटिङ सिस्टम प्रत्येक संस्करणमा। तपाईं एक Windows XP प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाईंले नियन्त्रण कक्षमा र मेनु फेला जाने छ "क्षेत्रीय र भाषा विकल्पहरू।" त्यहाँ पनि "विवरण" मा, तपाईं कुन भाषा पहिलो लोड गरिनेछ चयन गर्न सक्नुहुन्छ र जो उसलाई पछ्याउने। तपाईं केवल वस्तु "कीबोर्ड परिवर्तन" फेला पार्न, बरु वस्तु "विवरण" को लागि देख को आवश्यकता - विन्डोज को सातौं संस्करणमा, सबै कुरा समान धेरै पक्षहरूमा मा यद्यपि, एक सानो फरक छ। र एक र भाषा पट्टी मा विन्डोज को अन्य संस्करण पर्दा तल्लो दायाँ कुनामा देखि पहुँच गर्न सकिन्छ। तर आठौं "हावा" स्थिति मा यो लगभग पूर्ण यसको डिजाइन परिवर्तन गरिएको छ, धेरै फरक छ। तर आनन्दित - तपाईं अब "कन्ट्रोल प्यानल" जान आवश्यक छ। अंग्रेजी गर्न लेआउट परिवर्तन गर्न खेल सुरु गर्नु अघि यो Suffice र तपाईं कन्सोलमा Cheats प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही गलत भयो भने - चिन्ता छैन, खेल कम र फेरि भाषा स्विच गर्न प्रयास गर्नुहोस्, र त्यसपछि विन्डो खेल फेरि विस्तार, यो सबै कठिनाइ समाधान गर्नुपर्छ।
Cheats: प्रयोग गर्न वा छैन?
कोड धोखा - ठूलो आविष्कार कि खेलाडीहरूलाई तिनीहरूले एक विशेष विधामा उन्मुख कसरी राम्रो कुनै कुरा खेल रमाइलो गर्न अनुमति दिन्छ। के तपाईं पर्याप्त गति र reflexes छ असम्भाव्य छन् जहाँ जटिल "शूटर", आफूलाई प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले सधैं एक वा दुई धोखा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि जीवन धेरै सजिलो हुनेछ। यसबाहेक, तपाईं कुनै एक विन्दुमा फँस प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं जहिले पनि उल्टाउन कोड यो प्रसङ्ग पारित गर्न प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि यसलाई अक्षम, तपाईं समावेश। कि तपाईं खेल, दिन सक्दैन अप तपाईँले त्यसलाई पारित गर्न सक्दैन, यदि र मद्दत प्रयोग छ।
त्यस्तै, स्थिति "Skyrim" छ - यो खेल सरल भनिन्छ गर्न सकिँदैन, तर शैली र श्रृंखला को प्रशंसक यसलाई सामना गर्न सक्षम हुनेछ, र कोड को प्रयोग बिना। तपाईं "Skyrim" हटाउन सक्षम (वा कुनै पनि विशेष क्षण मा फँस) छैनन् भन्ने महसुस भने, तपाईं सधैं धोखा कोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर तिनीहरूले छ जबकि, पाठ्यक्रम, त्यहाँ एक नकारात्मक छ। आखिर, खेल को मजा को एक विशाल भाग तपाईं एक्लै विजय गर्न आफ्नो बाटो लड्न छन् कि उहाँका गुणहरू पराउँछु तथ्यलाई मा निहित र किनभने भाग्य को। कि यो छ - यो गेमप्लेको भाग, र यो बिना, यो धेरै फिक्का हुन्छ।
प्ले धेरै कम रोचक हुन्छ, तर खोज वा कहानी को पूरा धेरै खुशी ल्याउन छैन - धोखा ठीक यो छ। तसर्थ, किनभने "Skyrim", अन्य कुराहरु, तपाईं "उपलब्धि", तपाईं कोड प्रविष्ट यदि प्राप्त हुनेछ, पहिले तपाईँले धोखा कोड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ कि विचार गर्नुपर्छ रूपमा गर्न आवश्यक छ। तर तिनीहरूले खेल प्ले अभिन्न भाग भएकोले, धेरै महत्वपूर्ण पनि छन्। स्वाभाविक, निर्णय आफूलाई लागि प्रत्येक पर्छ, तर यो "Skyrim" र तपाईं निश्चित निस्कनुहोस् पाउन सक्दैन जो एक धेरै धेरै भयानक impasse छन् भने मात्र अन्य खेल जस्तै कोड प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। अन्य अवस्थामा, कुनै पनि अवस्थामा आफ्नै razrulit हुन धेरै nicer।
Neyrody: खेल "Varfreym" स्रोतहरू। जहाँ खेत neyrody?
यो काँचो खाना आहार यदि उपयोगी छ? समीक्षा
संधारित्र को प्रतिरोध
SA3 युग्मक :, उद्देश्य, आकार
वेरा Figner: जीवनी र जीवनको रोचक तथ्य
कसरी घर मा मान्छे मा कीडे ल्याउन
Vasileva Larisa: को कवि देखि - लेखक-publicist मा
मनोविज्ञान र आधुनिक को क्लासिक क्षेत्रमा